Tenga Youtube Makomendi Akachipa, $ 3 ye100 Chaiyo Youtube Mhinduro
Tenga YouTube Makomendi Akachipa
Kugadzira chiteshi cheYouTube kurota kwevanhu vese. Pasina mubvunzo, maonero uye kufarira zvinoita basa rakakosha, asi kuvaka nharaunda inobudirira, yakatendeka yeYouTube ndeimwe dambudziko guru rinotarisana nevazhinji veYoutubers mazuva ano. Ratidza pasi rose maitiro ako kuYouTube zvemukati zvaunogona kutenga maYouTube Comments zvakachipa uye chengetedza mari yakawanda. Sekureva kweGoogle, zvirevo hazvingowedzere kukosha kune mushandisi kubatanidzwa asi zvakare zvinobatsira vaparidzi kukwirisa kumusoro. Saka, kana iwe uchida zvese izvi, usamirira - tenga chirongwa chakachipa nhasi uye kusimudzira yako YouTube masosi.
Iwe unoda here kutora kubatanidzwa mumavhidhiyo eYouTube kune inotevera nhanho? Tenga YouTube Comments Zvakachipa uye kanganwa zvese zvinonetsa. Iye zvino, gadzirisa fungidziro dzese zvichienderana nekuti YouTube yataura kana kwete mavhidhiyo ako ari 100% chaiyo kana kuti kwete neyedu yepamusoro-mukirasi sevhisi. Ratidza kunaka mumavhidhiyo ako nekuwedzera iwo pfungwa nerubatsiro rwebasa redu rinoshamisa iro rinozoshandura mutambo - kukuwanira iwo akachipa YouTube makomendi.
Nei uchibhadhara chero munhu kuti atenge YouTube zvirevo zvemadhora zana asi iwe uchigona kuwana zvemhando yepamusoro zveYouTube zvirevo zvemadhora makumi matatu? Ehe, unozvitungamira chaizvo! Kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora makumi matatu, isu tine zvirongwa zvinokwana zvaunoda. Kwete izvozvo chete, yedu 100/30 rutsigiro uye akanakisa ane hushamwari ehunyanzvi masevhisi anotiita isu yakanakisa musika yekutenga chaiyo mhinduro paYouTube nemutengo wakachipa sezvaungagone kuwana.
10 Random / Tsika Mhinduro
20 Random / Tsika Mhinduro
30 Random / Tsika Mhinduro
50 Random / Tsika Mhinduro
100 Random / Tsika Mhinduro
200 Random / Tsika Mhinduro